အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက်လမ်းကြောင်းနှင့်စီမံကိန်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[17 / 08 / 2019] Denizli အတွက်စမတ်လမ်းဆုံယာဉ်အသွားအလာနှင့်အတူဖြေရှင်းပြဿနာများ	20 Denizli
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက်လမ်းကြောင်းနှင့်စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်
13 / 08 / 2019 Levent Ozen 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက်လမ်းကြောင်းနှင့်စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်: အဆိုပါအချက်တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်း၏တဦးတည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Aegean နှင့် Marmara ယခုပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်လိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir နာရီ93 192 ကီလိုမီတာနှင့်ပြီးစီးခဲ့ downloads, တစ်နာရီခွဲကြာအကြားကားလမ်း၏နောက်ဆုံးအပိုင်းန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan တို့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ 2010 ခုနှစ်တွင်ဧရာမစီမံကိန်းအားပေါ်တွင်အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် viaducts မှတဆင့်ပထဝီအတားအဆီးတံတားများ, ကျော်သွားပါပြီ။ ကားလမ်းယခုပွညျ့စုံ၏နှစ်ပေါင်းအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာအပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir အကြား 8 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်တထောင် 500 500 အကြောင်းကိုလူတွေ 384 ကီလိုမီတာသို့လျှော့ချခဲ့ရသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir ကြားရှိအဝေးပြေးလမ်းမလျှော့ချဖို့ 3.5 နာရီ အဆိုပါစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် 11 ဘီလီယံအထိ.
အစ္စတန်ဘူလ် GEBZE ORHANGAZİ IZMIR ကားလမ်း
Gebze - Orhangazi - (Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းများအပါအဝင်) İzmirကားလမ်း Build - Operate - လွှဲပြောင်းစီမံကိန်း 384 ကီလိုမီတာ အဝေးပြေးနှင့် 42 ကီလိုမီတာ လင့်ခ်လမ်းစုစုပေါင်း 426 ကီလိုမီတာ ရှည်လျား။
အစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမြေပုံ
တူရကီ၏ညှနျကွားအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2,5 ကီလိုမီတာများအတွက် Anatolian ကားလမ်း Interchange အပေါ်ဒီစီမံကိန်း Gebze ။ တစ်ဦးတံတားပြီးနောက် Dilovasi စတင်လမ်းဆုံကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြလိမ့်မည် - Hersekburn Osmangazi တံတားနှင့် Yalova နှင့်အတူ Izmit ပင်လယ်ကွေ့ထက်ကျော်လွန်အကြားလုပ် - Orhangazi ထံမှİzmitအဝေးပြေးတံတား Orhangazi လမ်းဆုံ-Bursa အမျိုးသားလမ်းမကြီးအပြိုင်အတွက်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်။
အဆိုပါOvaakça၏လမ်းဆုံအနီးရှိ Gemlik Orhangazi လမ်းကြောင်းဖြတ်သန်းပြီးနောက်ကခရိုင် Bursa ခါးပတ်အဝေးပြေးချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ Bursa Bursa ၏မြို့မြောက်ဘက်အနောက်ဘက်လေးကိုဆွဲ Bursa ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းအား site ၏အနောက်ပိုင်းအနောက် Interchange ၏လမ်းဆုံဖြတ်သန်းရတယ်။
Gebze-Orhangazi-Izmir (Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းများ) ကားလမ်း, Bursa အနောက်လမ်းဆုံရေကန် Uluabat ၏မြောက်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးနောက်မြောက်ဘက်Savaştepe၏ Karacabey Susurluk နှင့်Balıkesirကနေတောင်ဘက်-အနောက်ဘက်ဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားပြီးတော့ Soma-Kırkağaç- Akhisar မှနေကြတယ် လက်ရှိဘတ်စ်ကားဘူတာကြီးစွန်းတိုင်အောင်အပေါ်ပြည်နယ်လမ်းမကြီး Ring ကိုလမ်းမကြီးလမ်းဆုံမှအပြိုင်ရွေ့လျား Turgutlu-Izmir-တူရကီနှင့် Izmir ၏မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ဖြတ်သန်း -Saruhanl ။
Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီကားလမ်း, အ Izmir-Aydin, တူရကီရဲ့စီးပွားရေး Marmara နှင့် Aegean ဒေသကျောရိုးဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ် Izmir-CESMS အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ဦးအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထား access ကိုအဝေးပြေးလမ်းမကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အစ္စတန်ဘူလ်ဟာခရီးစဉ်အတွက်ပြည်နယ်နှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်ပြည်နယ်များအကြားရှိရာလူဦးရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa နှင့် Izmir နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အပန်းဖြေအသွားအလာလှုပ်ရှားမှုတွေပိုပြီးအဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ 95 ကီလိုမီတာကနေလမ်း၏လက်ရှိပြည်နယ်နှင့်အညီတစ်ခုလုံးကိုအဝေးပြေးလမ်းမကြီး။ လက်ရှိခရီးသွားအချိန်ကြောင်း 8 3,5 နာရီအချိန်အတွက်မည်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု၏အားသာချက်များများကိုတွက်ချက်လျှော့ချရန်ဖြစ်ပါသည်, ရလဒ်အတူ။ အဆိုပါအဝေးပြေး၏စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကို £ 11.001.180.608,25.dir
မိနစ်ကူးတို့ 1 20 ~ မိစဉ် pass ကားတစ်စီး 45 60 နာရီအားဖြင့်လက်ရှိလမ်းကို အသုံးပြု. ပင်လယ်အော်ရှောက်သွား; ပင်လယ်ကွေ့အကူးအပြောင်းမိဖို့လျှော့ချခဲ့သည် 12 နှင့်အတူ Osmangazi တံတား (6 ကီလိုမီတာ) ကဆောင်ရွက်။
ကီလိုမီတာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်အတူချိတ်ဆက်လမ်းများ၏ 97 3,4 ကီလိုမီတာ: Bursa-Balıkesirမြောက်အနောက် Interchange Interchange ကနေ
86 5,6 မိုင်နှင့်ကီလိုမီတာအဝေးပြေးလမ်းမကြီး link ကိုလမ်း: အနောက်လမ်းဆုံ Interchange အကြားBalıkesir-Akhisar
1 drawbridge,2viaduct, 38 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း,3အဆိုပါ 179 တံတားအပြည့်အဝတာဝန်ထမ်းဆောင်ရှိရာစီမံကိနျး၏နိဒါန်းနှင့်အတူယာဉ်အသွားအလာအဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းယခုနှစ်စဉ်းစား, အချိန် 2019 ဘီလီယံကိုပေါင်အပါအဝင် xnumx ရဲ့သံမဏိ, လောင်စာဆီ 2,5 သန်းပေါင်အပါအဝင်နှစ်စဉ်စုစုပေါင်း 930 ဘီလီယံခန့်3သန်းပေါင်, ငွေစုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ ယာဉ်အသွားအလာ 430 နှစ်ပေါင်းများ၏ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, 2023 ဘီလီယံကိုပေါင်တစ်ဦးစုစုပေါင်း31 1204အပါအဝင်သန်းဘီလီယံခန့်ဘီလီယံကိုပေါင်, လောင်စာဆီခန့်မှန်းနှစ်စဉ်ငွေစု၏သန်းပေါင်လိမ့်မည်သည့်အခါ။ အစ္စတန်ဘူလ် Izmir ကားလမ်းအကြားခရီးဟာ 120 8 နာရီမှနာရီကျေးဇူးတင်စကားကျကြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက် TL စုစုပေါင်းနံပါတ်ဖှငျ့မညျသည့်အခါ?
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက်: (။ 97 ကီလိုမီတာ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ Bursa အနောက်လမ်းဆုံ Balikesir မြောက်အမေရိက Interchange ကနေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့Balıkesirအနောက်လမ်းဆုံ Akhisar လမ်းဆုံ ratings (86 ကီလိုမီတာ။ ) açıklandı.istanbul Izmir ဖြတ်သန်းခမှ Izmir ရောက်ရန်အနည်းငယ် Liras ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်အခကြေးငွေများ, ? 1 ။ Osmangazi တံတားဖြတ်သန်းခအပါအဝင် Izmir နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အကြားလူတန်းစားကားများ, £ 256.30 လစာ။ ဤတွင်အခြားကားများ၏ကိန်းဂဏန်းများပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
နည်းလမ်း Osmangazi တံတား Yalova Altinova Bursa ဗဟို Balikesir မြောက်အမေရိက Manisa Turgutlu Izmir output ကို
1 ။ အတန်းအစား 103,00 ₺ 4,40 ₺ 29,10 ₺ 43,20 ₺ 63,80 ₺ 12,80 ₺
2 ။ အတန်းအစား 164,80 ₺ 6,90 ₺ 46,80 ₺ 69,06 ₺ 102,44 ₺ 20,00 ₺
3 ။ အတန်းအစား 195,70 ₺ 8,20 ₺ 55,50 ₺ 82,10 ₺ 121,60 ₺ 23,80 ₺
4 ။ အတန်းအစား 259,60 ₺ 10,90 ₺ 73,60 ₺ 108,90 ₺ 161,30 ₺ 31,50 ₺
5 ။ အတန်းအစား 327,60 ₺ 13,80 ₺ 92,80 ₺ 137,40 ₺ 203,50 ₺ 39,90 ₺
6 ။ အတန်းအစား 72,10 ₺ 3,10 ₺ 20,40 ₺ 30,20 ₺ 44,80 ₺ 8,80 ₺
ခရီးသည်တင်ကားများလက်မှတ်စျေးနှုန်းများအဘို့အ Osmangazi အစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးတံတားသေဆုံးသူအပါအဝင်
အစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကြေး
အစ္စတန်ဘူလ် IZMIR အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းစရိတ် Tariff (TOTAL)
နည်းလမ်း Osmangazi တံတား Yalova-Altinova Bursa ဗဟို Balikesir မြောက်အမေရိက Manisa Turgutlu Izmir output ကို
1 ။ အတန်းအစား £ 103,00 £ 107.40 £ 136.50 £ 179.70 £ 243.50 £ 256.30
2 ။ အတန်းအစား £ 164.80 £ 171.70 £ 218.50 £ 287.56 £ 390,00 £ 410,00
3 ။ အတန်းအစား £ 195.70 £ 203.90 £ 259.40 £ 341.50 £ 463.10 £ 486.90
4 ။ အတန်းအစား £ 259.60 £ 270.50 £ 344.10 £ 453,00 £ 614.30 £ 645.8
5 ။ အတန်းအစား £ 327.60 £ 341.40 £ 434.20 £ 571.60 £ 775.10 £ 815,00
6 ။ အတန်းအစား £ 72.10 £ 75.20 £ 95.60 £ 125.80 £ 170.60 £ 179.40
စီမံကိန်းအလှူငွေ 3.5 BILLION
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်ယနေ့အစ္စတန်ဘူလ် Izmir ကားလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပေးသောကိန်းဂဏန်းများ Izmir ကားလမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောသည်နှင့်အတူ 192 lKm ကသမ္မတအာဒိုဂန်, ဒုတိယအဆင့်အဖွင့်ပွဲလုပ်လေ၏။ အာဒိုဂန်ကုန်ကျစရိတ်, သူလကြာကုမ္ပဏီနှင့်အတူရှိ၏ကြောင်း 11 22 နှစ်ပေါင်းအတူအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတည်ဆောက်-operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ် $4ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
Akhisar-Turgutlu post ကိုတူရကီမှအပြိုင် Izmir ဆက်လက် Izmir လက်စွပ်လမ်းအတွက်၎င်း၏ဦးတည်ရာမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ် - 192 lKm ၏အစ္စတန်ဘူလ် Izmir Otol အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir အကြားခရီးအချိန်နှင့်အတူပြီးဆုံးဖို့လမ်း 3,5 နာရီအာဒိုဂန်, Soma လျှော့ချကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ Izmir Aydin နှင့် Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစမ်းရောက်ရှိ။ ကျနော်တို့တောင်များကျော်လွန်ရှိရာကနေ ... လွယ်ကူသော။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ Ferhat Ferhat တောင်တန်းခဲ့ကြသည် ... ကျနော်တို့ရောက်နေပြီ del Shirin ကဆိုသည်။ အာဒိုဂန်, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir အဖြစ်ကြောင့်လုပ်နေတာတဲ့အဆင်ပြေလမ်းပိုမြန်ပြည်နယ်အားဖြင့်အလောင်းအစားများ၏အလှူငွေတိုဘီလီယံ 100 3,5 အကြားကီလိုမီတာခရီးသွားလာသူကဆိုသည်။
အစ္စတန်ဘူလ် Izmir Otabe သစ်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ
အစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးစီမံကိန်းဖျြောအလုပ်
1 စုစုပေါင်းရပ်ဆိုင်းမှုတံတား, viaduct 38,3အပိုင်းပိုင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းဆုံကိုအပိုင်းပိုင်း 24, 179 စုစုပေါင်း Bridges, culverts 1005, 17 အပိုင်းပိုင်းအဝေးပြေးဝန်ဆောင်မှု Facility,4စုစုပေါင်းစောင့်ရှောက်စီးပွားရေးစက်ရုံ, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း2စုစုပေါင်းအိမ်ခြံမြေကို Maintenance Facility ရရှိနိုင်ပါသည်။
(Izmir-Turgutlu) Dy ။ Ayr ။ 6,5 20.10.2015 Gulab အကြားကီလိုမီတာရှည်လျား link ကိုလမ်းပေါ်, Altınova - Gemlik ထံမှ 40 နှင့် 7,9 ကီလိုမီတာကားလမ်းကီလိုမီတာ။ Link ကိုလမ်းမ 21.04.2016, အဝေးပြေး 12,6 အပေါ် Gebze-Altınova (Osmangazi တံတားနှင့် Inns) ၏ 01.07.2016 ကီလိုမီတာ, 20 ကီလိုမီတာကားလမ်းတွင် 08.03.2017 အပေါ် Gulab အကိုင်းအခက်-Izmir, Gemlik-Bursa ထံမှ 25 ကီလိုမီတာကားလမ်းနှင့် 1,6 ကီလိုမီတာအကြား။ Link ကိုလမ်း, Saruhanlıလမ်းဆုံအပေါ် 12.03.2018 - Gulab လမ်းဆုံမှသည် 49 ကီလိုမီတာ။ 3,8 ကီလိုမီတာ Access ကိုလမ်းနှင့်ကားလမ်း 01.12.2018 အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်။ 146,6 20 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကိုစီမံကိန်းကို 166,5 ကီလိုမီတာကားလမ်း link ကိုလမ်း, စီးပွားရေးမှပြီးစီးခဲ့နှင့်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Balikesir အစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးစီမံကိန်းရဲ့တစိတ်တပိုင်း
အဆိုပါ 2019 29 ခုနှစ်တွင်ပင်မခန္ဓာကိုယ် 3,5 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာနှင့်အတူ Balikesir Balikesir မြောက်အနောက် Interchange လမ်းဆုံမှသည်။ Akhisar နှင့်အတူ Link ကိုလမ်းမကြီးလမ်းဆုံ - Saruhanlıလမ်းဆုံမှသည် 24,5 ကီလိုမီတာ။ အဓိကကခန္ဓာကိုယ် 8 ကီလိုမီတာရှည်လျား link ကိုလမ်းပြီးစီးခဲ့ပါသည် Akhisar မတ်လ 17 2019 '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။
နယူးအစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးစျေး
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက်: (İzmitဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းလမ်းများအပါအဝင်) Gebze-Orhangazi-İzmirအဝေးပြေးစီးပွားရေး "တွင်; Bursa အဝေးပြေးအနောက်Kavşağı- (Balıkesir-Edremit) အနောက်လမ်းဆုံ Balikesir မြောက်လမ်းဆုံနှင့်အတူ bursa Ring ကိုအတွင်းသီးခြားအစိတ်အပိုင်းများ (ကီလိုမီတာ: 104 + 535-201 + 380) အနောက်လမ်းဆုံနှင့်အတူ Balikesir Akhisar လမ်းဆုံအတွင်း (Balıkesir-Edremit) က Non-Izmir ပုဒ်မကနေ (မိုင်အကွာအဝေး: 232 000 +: မှာ IR-315 114 +) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်ဥပဒေအဝေးပြေးအမှတ် 6001 15 ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကဏ္ဍများ။ ဆောင်းပါးနှင့်အညီယာဉ်အသွားအလာမှအဖွင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါကားလမ်းနေ့စွဲနှင့်အချိန် 04.08.2019 ဤကဏ္ဍများ: 23: 59 အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက် Calculator ကိုလင့်ခ်
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကိုလိုင်းနှစ်ခုအဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ စင်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့စုစုပေါင်း7သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများစီမံကိန်းကို2အဆင့်သို့ကွဲပြား၏ split အဖြစ် Izmir - Orhangazi Orhangazi - - Bursa, Bursa - Susurluk, Susurluk - Balikesir, Balikesir - Kırkağaç, Kırkağaç - Manisa နှင့် Manisa Gebze နှင့် ပတ်သက်. ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တာဝန်များ :
Phase ငါ: gebze (ကီလိုမီတာ + 58 300) နဲ့İznikတောင်ပိုင်းလမ်းဆုံထံမှဖြစ်၏ Gebze-Orhangazi (1 ။ ဖြတ်တောက်ခြင်း) နှင့် Iznik Orhangazi တောင်ပိုင်းလမ်းဆုံမှတက်ကနေခန့်9ကီလိုမီတာအပိုင်းပါဝင်ပါသည်
II ကို။ Phase: Iznik တောင်ပိုင်းလမ်းဆုံနှင့် Izmir အကြားဖြစ်၏ Iznik တောင်ပိုင်းလမ်းဆုံ - Bursa, Bursa - Susurluk, Susurluk - Balikesir, Balikesir - Kırkağaç, Kırkağaç - Manisa နှင့် Manisa - အပိုင်း Izmir ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ 2015 အဆင့် I, II ပါ။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်စာချုပ်၏7နှစ်ကြာချိန်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
စာချုပ်များ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်အဆိုပါမိုဘိုင်းနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့, 15 သဘောတူညီချက်များ၏အင်အားသုံးသို့ဝင်သောချေးငွေသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်မတ်လ 2013 ကတည်းကအလုပ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆက်လက်။
377 ကီလိုမီတာ link ကိုလမ်းအပါအဝင်စုစုပေါင်းရှည်လျားကီလိုမီတာအဝေးပြေးလမ်းမကြီး KGM တင်သွင်းခြင်းနှင့် 44 421 ကီလိုမီတာအပေါ်အခြေခံသည်အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုချက်ကို။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားတံတား, တောင်ချဉ်းကပ် Viaduct, စုစုပေါင်း 18,212 မီတာရှည်လျား 29 viaduct, စုစုပေါင်း 5,142 မီတာရှည်လျား2စုစုပေါင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, 199 တစ်ခုချင်းစီကိုတံတား, 20 စုစုပေါင်း Booth ဧရိယာ, 25 စုစုပေါင်းလမ်းဆုံ,6စုစုပေါင်းအဝေးပြေးကို Maintenance နှင့်စစ်ဆင်ရေးစင်တာ,2စုစုပေါင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို Maintenance နှင့် Business Centre, 18 ကို double-ဘက်ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ (2 type ကိုတစ်ဦး, type ကို B ကို 4,57 ကို C အမျိုးအစားနှင့် D-type ကိုယူနစ်) ဆောက်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
သို့သော်ကြောင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏လမ်းကြောင်းကီလိုမီတာတလျှောက်တွင်မြေ၌ကြုံတွေ့ပြဿနာတွေနဲ့ 384 43 ကီလိုမီတာ link ကိုလမ်းစီမံကိန်း၏ပြုသောအမှုအပိုဆောင်းပုံစံဒီဇိုင်းအလုပ်ပေါ်ထွက်လာသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရှည်လျားအပါအဝင် 427 ကီလိုမီတာစုစုပေါင်းမှစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိစီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်းလေ့လာမှုကိန်းဂဏန်းသတင်းအချက်အလက်ကိုအောက်တွင်ပြသထားပါသည်:
• Track ရှည် (နယူးအရာ): 384 ကီလိုမီတာ
• Bursa Ring ကိုလမ်းမ (traffic ကိုလမ်းဖွင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏နယ်ပယ်အပြင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်): 22 ကီလိုမီတာ
•စုစုပေါင်းပင်မခန္ဓာကိုယ်: 406 ကီလိုမီတာ
• Access ကိုလမ်းများ: 43 ကီလိုမီတာ
•လမ်းဆုံကိုင်တွယ်: 65 ကီလိုမီတာ
•လက်ရှိအဝေးပြေး, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်လမ်းမကြီးအစီအစဉ်: 31 ကီလိုမီတာ
•ဘေးထွက်လမ်းများ: 136 ကီလိုမီတာ
အစ္စတန်ဘူလ် IZMIR အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသဘောတူစာချုပ်သတင်းအချက်အလက်များ
အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်း, ဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေး, စစ်ဆင်ရေးနှင့်အညီငွေကြေးထောက်ပံ့စီမံကိန်း, (ထို Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းများအပါအဝင်) Gebze-Orhangazi-Izmir ကားလမ်းစီးပွားရေး,, စီးပွားရေးနာရီ, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်မည်သည့်လမ်းမကြီးစဉ်အတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုယင်းစာချုပ်ကာလရဲ့အဆုံးမှာ ကြွေးမြီနှင့်ကတိကဝတ်ထံမှအခမဲ့, ဆောင်ဖို့ပြေး, မရရှိနိုင်ပါနှင့်ရေးရာ၏အုပ်ချုပ်ရေးလွှဲပြောင်းတာဝန်ခံအခမဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
အဆိုပါစီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ: 10.051.882.674 TL ။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဧပြီလ 07 2008
နောက်ဆုံးနေ့: ဧပြီလ 09 2009
စာချုပ်နေ့စွဲ: 27 စက်တင်ဘာလ 2010
(ထို Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းများအပါအဝင်) Gebze-Orhangazi-Izmir ကားလမ်းစီမံကိန်း9ဧပြီလ 2009, တစ်နှစ် 22 ay'lıkကမ်းလှမ်းမှုကို (ဆောက်လုပ်ရေး + စစ်ဆင်ရေးအားဖြင့်ထုတ်ပေး Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Gocay ဖက်စပ်4အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်နု၏ ) ကအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စောင့်တပ်ဖွဲ့ကုမ္ပဏီ: Gebze-Orhangazi-Izmir (Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းများ) ကားလမ်း Build-Operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်နှင့်ဖက်စပ်ရဲ့မိတ်ဖက်များကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Gocay များ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်လွှဲပြောင်းဖျော်ဖြေဖို့, Nurol ပြုသောအမှု 20 တူရကီအဝေးပြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စက်တင်ဘာလ 2010 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အစ္စတန်ဘူလ် IZMIR အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသဘောတူစာချုပ်ပါတီ
သဘောတူညီချက်ထိရောက်သောနေ့စွဲ: မတ်လ 15 2013
စာချုပ် Duration: အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်း 224လတစ်နှစ်တာ (ထုတ်လုပ်မှု + စီးပွားရေး) ဃ၏အင်အားသုံးသို့ entry ကို၏နေ့စွဲကနေ Applications ကို။
စာချုပ်ပြီးဆုံးရက်စွဲ: ဇူလိုင်လ 15 2035
ဆောက်လုပ်ရေးကာလ: ကွန်ဗင်းရှင်းအပလီကေး7နှစ်ဖြစ်၏ရက်စွဲကနေအင်အားသုံးသို့ဝင်သော။
ပြီးစီးသည့်ရက်စွဲအလုပ်လုပ်တယ်: မတ်လ 15 2020
traffic အာမခံ: စီမံကိန်းအတွက်သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့4အာမခံချက်အသွားအလာပေးအပ်ထားတယ်။ ဤရွေ့ကားဖြတ်တောက်မှုနှင့်အသွားအလာအာမခံချက်;
ငါ xnumx.kes: Gebze - 40.000 ကားများ / Day ကိုညီမျှ Orhangazi,
ငါ xnumx.kes: Orhangazi - Bursa (Ovaakça Interchange) 35.000 ကားများနှင့်ညီမျှရန် / နေ့
ငါ xnumx.kes: Bursa (Karacabey Interchange) - ခွဲခြာ / Day ကိုမှBalıkesir / Edremit 17.000 ကားများနှင့်ညီမျှနှင့်
ငါ xnumx.kes: (Balıkesir - Edremit) ခွဲခြာ - Izmir / နေ့ '' လိပ်မှ 23.000 မော်တော်ယာဉ်နှင့်ညီမျှ။
WHO က IZMIR အစ္စတန်ဘူလ်မှအဝေးပြေးလမ်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ
ကားလမ်းအပိုင်း KM: 0000 - 4175 (ASTALDI)
ရပ်ဆိုင်းမှုတံတား KM: 41175 - 74084 (IHI-ITOCHU)
တောင်ပိုင်းချဉ်းကပ် viaduct KM: 74084 - 81411 (NUROL)
ကားလမ်းအပိုင်း KM: * 8 411 - 194213 (MAKYOL-GÖÇAY)
ကားလမ်းအပိုင်း KM: 194213 - 301700 (YÜKSEL-OZALTIN)
ကားလမ်းအပိုင်း KM: 344350 - 434296 (NUROL)
ကားလမ်းအပိုင်း KM: 491076 - 584300 (MAKYOL)
II ကို။ ကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်အဆိုပါ Phase
ကားလမ်းအပိုင်း KM: 1044535 - 1614300 (GÖÇAY)
အဝေးပြေးလမ်းဖြတ် KM: 1634300 - 2241300 (ASTALDI)
ကားလမ်းအပိုင်း KM: 2244300 - 3174284 (NUROL) J ကို
ကားလမ်းအပိုင်း KM: 3174450 - 3174284 (OZALTIN-MAKYOL)
အဝေးပြေးလမ်းဖြတ် KM: 3634450 - 408 654.59 * (ÖZALTIN)
အဆိုပါ Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေး 30 / 10 / 2015 Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားအကူးအပြောင်းတာဝန်ခံ: သူအချက်အလက်များအကြောင်း 2016 လအကြာ Gebze-Orhangazi-Izmir Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားဆောက်လုပ်ရေးအပြည့်အဝလွှဲများတွင်ဆက်လက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းအရေးအပါဆုံးအပိုင်းကြောင်းလှည့်အရာ5နှစ်ပေါင်းမတ်လပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Feridun Bilgin ။ စစ်ဆင်ရေးကိုတင်သောအဓိကလေယာဉ်တင်သင်္ဘော cable ကိုသူတို့ကုန်းပတ်ကိုတင်သောစတင်ပါလိမ့်မည်ဒီဇင်ဘာလ၏အစ၏အဆုံးချဉ်းကပ်။ စုစုပေါင်း 433 စီမံကိန်းရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအရှည်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီး xnumx'lik ကီလိုမီတာ။ အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ပျံသန်းမှုဧရာစီမံကိန်းတစ်နှစ်လျှင် $ 50 သန်း၏တစ်ဦးငွေစုပေးစီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုလေဖြတ် 3,5 နာရီ။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်သေဆုံးသူပိုက်ဆံ 650 ဒေါ်လာပေါင်း KDV တူရကီလိုင်ရာပါ။ ဒီဇင်ဘာ ...
ပင်လယ်ကွေ့ Crossing တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေး OK ကိုဒါဘယ်လိုအများကြီး 22 / 04 / 2016 Passage တံတား၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပင်လယ်ကွေ့မှပင်လယ်ကွေ့ချိတ်ဆက်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ပျံသန်းမှုများဖွင့်လှစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစ္စတန်ဘူလ်-Bursa-Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပြီးစီးခဲ့ပါသည် 3,5 နာရီကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်: ပင်လယ်ကွေ့ Crossing တံတား ok ဒါဆိုဘယ်လိုအများကြီး Tolls ။ ကောင်းပြီ, ပင်လယ်ကွေ့ Crossing တံတားသေဆုံးသူမည်မျှဖြစ်မည်နည်း ဤတွင်ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားဆင်းသက်များအတွက်ပြင်ဆင်မှုပြီးစီးခဲ့ပါသည်အဖြေ ... ပါပဲ။ လုံခြုံရေးအစီအမံများလာမယ့်အဆင့်အထိဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်မတိုင်မီဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်နှင့်သမ္မတ Ahmet Davutoglu အခမ်းအနားတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အမြန်၏ 384 ကီလိုမီတာပြီးဆုံး Build-Operate-လွှဲပြောင်းစီမံကိန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေး, သမိုင်းဝင်စီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့် 49 ကီလိုမီတာတစ်ဦးစုစုပေါင်းအရှည်ရောက်ရှိ 433 ကီလိုမီတာ link ကိုလမ်းလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန် ...
ဂလားပင်လယ်အော်တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေးလျှော့စျေး Visited, ဒီမှာခွန်ကောက်မယ့် 22 / 06 / 2016 သူကခွန်ကောက်ဒီမှာဂလားပင်လယ်အော်တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေးလျှော့စျေးသွားရောက်ခဲ့ပြီး: စျေးအကြီးအအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ $ 121 90 TL ၏ Osmangazi တံတားသေဆုံးသူဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့ကားများအတွက်သတ်မှတ်သော။ ယင်းအချိန် 5.5 နာရီ9နာရီ Gebze Orhangazi-Izmir အဝေးပြေးစီမံကိန်းနာရီလျှော့ချရန် 3.5 တိုအကြားအစ္စတန်ဘူလ် Izmir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်တကွ, သေဆုံးသူလျှော့ချများအတွက် Osmangazi တံတား, 35 ဒေါ်လာ + KDV (121 TL) Calculator ဖွဲ့စည်း၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။ တံတားသေဆုံးသူ 25 ရာခိုင်နှုန်းလျော့ချလိမ့်မည်။ ဤသည်သေဆုံးသူညှိနှိုင်းမှုအပြီး, $ 90-91 မှတက်ကြလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Mid-span ရပ်ဆိုင်းမှုတံတားများအကြား ...
တူရကီက Metro လက်မှတ်ခများ, အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထားနှင့်ဒေသခံဘတ်စ်ကားတာဝန်ခံအခကြေးငွေများ 09 / 04 / 2014 တူရကီက Metro လက်မှတ်ခများ, အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထားလက်မှတ်ခများနှင့်ဒေသခံဘတ်စ်ကားအခကြေးငွေများ: M1 Aksaray-လေဆိပ်က Metro, M2 Şişhane-Hacıosman Metro, T1 Bagcilar-ကျောက်ခေတ်ဓါတ်ရထား, T3 Kadikoy - ဖက်ရှင် Tramway, T4 Topkapi - Habibler Tramway, F1 Taksim -Kabataşကြိုးဆွဲရထား, Macka - Taşkışlaနှင့်Eyüp - Pierre ၏ Loti Cableway Lines သစ်ကိုကြေးဇယားတိုကင်ဖြစ်ပါသည်: e-လက်မှတ်နှုန်း3(Akbil - istanbulkart): ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် 1,95 က e-လက်မှတ် (Akbil - istanbulkart): 1 TL လျှော့ပါ e-လက်မှတ် (Akbil - istanbulkart): 1,35 TL အခမဲ့ပြီးလျှော့ခရီးသွားကတ်များကဒ်အစီအစဉ်များကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်အညီလုပ်လျက်ရှိသည်ခရီးသွားလာ ...
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းကောင်းပြီဘယ်လိုအများကြီး Tolls .. ဖွင့်လှစ်? 04 / 08 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းမှအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir အကြားခရီးသွားအချိန်5နာရီန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan တို့ကဖွင့်လှစ်သည်ယနေ့ကျင်းပခဲ့သည်နာရီ 3.5 192 ကီလိုမီတာ segment ကို, ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ဒီပိုက်ဆံသုံးစွဲဖို့ဒါနညျးလမျးမြားစှာ? ကားများအဘို့ဖြတ်သန်းခထဲကနေ Izmir နှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Osmangazi တံတားနှုန်း 256.3 ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဘာကိုအခြားကားတစ်စီးအတန်းတက်ပေးဆောင်? အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir အကြားခရီးသွားအချိန်5နာရီရေတံခွန် 3.5 နာရီ။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတွေ Izmir မှစုံတွဲတစ်တွဲနှုန်းပိုက်ဆံပေးဆောင်ရောက်ရှိဖို့ရန်ဤအဝေးပြေးလမ်းမကြီးသုံးစွဲဖို့။ 1 နှုန်းလစာအပါအဝင် Izmir နှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Osmangazi တံတားဖြတ်သန်းခကနေxnumx.sınıfကားတစ်စီး။ ဤတွင်အခြားအများမှာ ...
Haliç Metro ေူပာင်းလဲရေး 180 သန်းကုန်ကျ 01 / 04 / 2013 မျှော်မှန်း Marmaray'l ချိုက Metro Crossing တံတားလေထဲက Viewed နှင့်အတူHaliç Metro ေူပာင်းလဲရေးဒီနှစ်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းဖို့ 180 သန်းကုန်ကျ။ တောင်ဘက်လက်ရှိတံတား၏Haliçက Metro တံတား, Unkapanıပျမ်းမျှအား 1 မီတာဆောင်ရွက်မည်သည့် 200 သန်းခရီးသည်တစ်ဦးနေ့ဖြစ်၏။ တံတားရထားလမ်းနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာမှပွင့်လင်းနှစ်ခုဘက်၏အလယ်တွင်။ တူရကီပထမ 1804သန်းဒေါ်လာကုန်ကျမည်နှင့်ရွှေဦးချိုတံတားအလုပ်၏မီထရိုဘူတာရုံသွားရာရပါလိမ့်မယ်အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာရောက်နေပါတယ်။ ပြီးစီးသည့်အခါတံတားတူရကီတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ပင်လယ်တံတားအထက်သန်းကုန်ကျ 180 13 မီတာအရှည်, 430 မီတာအတွက် 47 မီတာကိုဖန်ဆင်း ...
Bosphorus - ဘယ်လိုအများကြီး FSM တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေး 15 / 03 / 2014 Bosphorus - FSM တံတားဘယ်လိုအများကြီး Tolls: ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Lutfi Elvan, ယနေ့နှင့်အတူ 12.00 ဂုဏ်သတင်းမှာစမ်းသပ်လုပ်ငန်းစဉ် (HGS) အဖြစ် Fatih Sultan Mehmet တံတားဤနေရာသို့သွားရန်စနစ်နှင့်ခွန်ကောက်ငွေကောက်ခံစနစ် (ETC) တွင်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပူးတွဲအကူးအပြောင်းကာလရဲ့ start ထုတ်ပြန်ကြေညာ ။ Elven သည်အထူးသဖြင့်Çamlicaအတွက် FSM အတွက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်စနစ်, နှင့်အကောင်အထည်ဖော်အပါအဝင်ပါလိမ့်မယ်လည်း Bosphorus တံတား tollbooth သူကဆိုသည်။ Elven, AA ကိုသတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်ထဲမှာအများသုံးစက်ရုံများ၏ပေါင်းစပ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ရုံးခန်းထဲမှာ HGS နှင့် ETC စနစ်ကသိသိသာသာယာဉ်ကြောစီးဆင်းမှုကိုအထောက်အကူပြုမည်ဟုဆိုသည်။ ဤအခြေအနေတွင်အတွက်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုအတွက် Fatih Sultan Mehmet တံတား, အလုပ်မှာယနေ့ ...
ဂလားပင်လယ်အော်တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေး (ဗီဒီယို) ၏Uçuklatıyနှုတ်ခမ်း 07 / 08 / 2015 ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တံတားUçuklatıy၏ခွန်ကောက်နှုတ်ခမ်း: 2010 KDV ဒေါ်လာပြန်ထွက်သွားသည်အဖြစ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တံတားသေဆုံးသူများ၏ 35 အခြေခံခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါသေဆုံးသူသည်ယနေ့အခါ, 1.43 ဒေါ်လာစျေးနှစ်ဆစဉ် 60 2.79 ပေါင်ချိန်းတွေ့ကြကြောင်း Quotes ။ အရေးအပါဆုံးအကူးအပြောင်းပွိုင့် Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားမတ်လဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းမည်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir-Gebze-Izmir အဝေးပြေးစီမံကိန်း Orhangazi ကနေ download လုပ်ပါမှ 3,5 နာရီ။ အဆိုပါသေဆုံးသူတံတားဒေါ်လာစျေးအတွက်မြင့်တက်နှင့်အတူနှစ်ဆပြီဆိုရင်။ ဒေါ်လာ ACCESS တံတား groundbreaking အခမ်းအနားအောက်တိုဘာလ 29 2010 တွင်ကျင်းပခဲ့သည်စျေးကြီးနေတာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်အဆိုပါသေဆုံးသူတံတား 35 ဒေါ်လာ + KDV အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ တံတားဖြတ်ကူး ...
ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံİzmitဂလားပင်လယ်အော်တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေး 17 / 02 / 2016 ကားပိုင်ရှင်များ Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားသူတို့ကဒေါ်လာစျေး 35 + KDV ကိုသုံးပါလျှင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်: İzmitဂလားပင်လယ်အော်တံတားကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ Tolls ။ ဤသည်အခကြေးငွေ Izmit, ဘေးကသေဆုံးသူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ္ဘာကြီးကို drawbridge အတွက်စျေးအကြီးဆုံးတည်နေရာ ... အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir အဆိုပါ Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတားအတွက် 3.5 နာရီ Gebze-Orhangazi-Izmir လေ့လာမှုများမှလမ်းခရီးစဉ်ကိုလျှော့ချမည်အဝေးပြေးစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူဆက်လက်။ အဆိုပါတံတားသည်ယခုနှစ်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ သို့သော်ဆွေးနွေးမှုများအဆိုပါသေဆုံးသူတံတားဆောက်လုပ်ရေးများ၏ရှေ့မှောက်၌ယခုခဲ့ကြသည်။ တံတားဖြတ်သန်းမှမော်တော်ယာဉ်များဆပ်ဖို့တစ်ခုတည်းဖြတ်သန်းဘို့ KDV ကန်ထရိုက် + ဒေါ်လာ (ဒီနေ့ပိုက်ဆံအတွက် 35 ပေါင်) 122 သငျ့သညျ။ ဒီပါလျှင် ...
အဆိုပါ Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတား Re-တာဝန်ခံ Event ခဲ့ 25 / 02 / 2016 အဆိုပါ Izmit ဂလားပင်လယ်အော်တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေးပွဲတဖန်ဖြစ်သွား: နောက်တဖန်ထအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုပင်လယ်ကွေ့ Crossing တံတားဖြတ်သန်းခအပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်း။ အဆိုပါကြေးကာကွယ်သူကိုသတ်မှတ်ထားသော2+ KDV များအတွက် 682 35 တထောင်ဒေါ်လာမီတာတံတားမြင့်မားသည်, အချို့ကားများအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောက်ပိုင်းလုပ်ခမှလာလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းအားအကြားရှိပြီးဖြစ်သောတူရကီအတွက်ဆောက်လုပ်ဆဲက Hurriyet အဓိကစီမံကိန်းများကိုအရသိရသည်။ စီမံကိန်းများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်ဦး320 မိနစ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နာရီကနေအစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ပျံသန်းမှု9ဒေါ်လာဘီလျံအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့ Crossing Project မှဖန်တီးတံတား၏အရေးကြီးသောတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တံတား2682 ၏စုစုပေါင်းအရှည်တထောင်မီတာ ... ။
အစ္စတန်ဘူလ် Izmir ကားလမ်းလမ်းကြောင်း
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက် Calculator ကို
အစ္စတန်ဘူလ်ကနေ Izmir ကားလမ်းအနည်းငယ်ကီလိုမီတာ
ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook က တွစ်တာ Google+ မှာ YouTube ကို LinkedIn တို့
Haliç Metro ေူပာင်းလဲရေး 180 သန်းကုန်ကျ
Bosphorus - ဘယ်လိုအများကြီး FSM တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေး
ဂလားပင်လယ်အော်တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေး (ဗီဒီယို) ၏Uçuklatıyနှုတ်ခမ်း
အဆိုပါ Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing တံတား Re-တာဝန်ခံ Event ခဲ့
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (262) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (619) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (518) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (665) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)